Ndị jidere ihe karịrị mwakpo DDoS 150.000 jidere | Akụkọ akụrụngwa
E jidere ndị na-ahụ maka mwakpo DDoS karịrị 150.000
N'okpuru aha agha DDoS Anyị chọtara sistemụ nke onye na-awakpo ya ga-anwa idei mmiri weebụ yana arịrịọ nnweta. Site na mwakpo a ma ọ bụrụ na anyị jikwaa ịme arịrịọ ndị ahụ zuru ezu, sava ahụ ga-eru ebe ọ na-enweghị ike ịza ha niile ma ọ ga-akụ. Ofdị ọgụ a anaghị emebi nche nke ọrụ anyị na-enye mana kpọnwụrụ ya ruo awa ole na ole.
Usoro a bụ nke otu ahọrọ umu Israel abuo umuaka iri na asatọ, nke a maara dị ka Itay Huri na Yarden Bidani, ndị a gaara ebo ebubo na ha malitere ọrụ DDoS kachasị ire ahịa na mbara ala. Banye ntakịrị ntakịrị nkọwa, gosipụta na ndị na-eto eto a bụ ndị okike nke ụlọ ahịa ahụ Nnukwu, ọrụ ntanetị nke na-ere n'ụzọ nkịtị malware na-achọ nwee ike ibuso ụdị DDoS niile ọgụ.
Mụaka abụọ dị afọ 18 ga-ahụ maka imirikiti mwakpo DDoS emere na afọ ndị na-adịbeghị anya
Dabere na ndị ọkachamara, saịtị vDOS yiri ka na-ahụ maka ọtụtụ mwakpo DDoS nke mere na ụwa n'afọ ndị na-adịbeghị anya. N'ihi ịbụ ndị rụrụ karịa 150.000 ọgụ, na-eto eto hackers gaara jisiri akpa nke ihe ego nso 600.000 euro. A ka nwere ọtụtụ ọrụ ị ga-arụ ka ihe akaebe ga-achịkọta ma gbaa akwụkwọ ebubo. N'oge a ụmụ okorobịa abụọ ahụ ka nọ n'okpuru njide ụlọ na ọka ikpe machibidoro ha ịntanetị maka ụbọchị 30.
Banyere otu esi achọpụta onye kpatara ọrụ a pụrụ iche, ịkọwa na n'ụzọ aghụghọ, ikpe a niile pụtara n'ihi na ụlọ ọrụ nchekwa nke tara ahụhụ otu n'ime mwakpo gị meriri ọrụ vDOS gị. N'ihi nke a, ha nwere ike ijide ndepụta nke ndị ahịa ma site n'ebe ahụ ha jisiri ike ikpughe njirimara nke ndị na-eto eto abụọ.
Ozi ndi ozo: KrepsOnSecurity
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » E jidere ndị na-ahụ maka mwakpo DDoS karịrị 150.000
Samsung nwere ike ịkwalite mmalite nke Galaxy S8 iji mechie nsogbu nke Galaxy Note 7
Nsogbu Samsung na-etolite ma ugbu a ọ bụ ihu ọma nke Galaxy S7 nke gbawara n’etiti ụlọ nri